Ahoana ny fomba hanovana ny ambadiky ny antso an-tsary ao amin'ny Google Meet | Androidsis
Ahoana ny fomba hanovana ny ambadiky ny antso an-tsary ao amin'ny Google Meet
Ny sehatra Google Meet dia nanao niche lehibe ho azy efa ela ho toy ny sehatra fiantsoana horonantsary tiany taorian'ny namoahan'i Google. Hatramin'ny martsa 20221 mpampiasa rehetra azon'izy ireo ampiasaina maimaim-poana ary izany dia nanampy azy hanana mpanaraka.
Iray amin'ireo fanampiana farany nataony ny afaka manova ny ambadiky ny antso an-tsary, zavatra iray azo atao Zoom fotoana vitsy lasa izay ary tena tian'ireo mpampiasa azy izany. Ary io safidy io dia nanjary ho an'ny mpampiasa rehetra ao amin'ny sehatra Google Meet.
Tsy mila Chroma izahay hametraka ambadiky ny antso an-tsary ao amin'ny Google MeetSafidio fotsiny ny sary iray amin'ireo efa voafaritra mialoha, mampakatra iray na aza manadino ny afara. Ny telo dia tena mahaliana raha te hiresaka hafa amin'ireo antso mankaleo ireo ianao.
Ny endri-javatra dia nampifandraisina tamim-pahombiazana, tsy mitaky fotoana firy ary azonao atao ny manova azy isaky ny te hampiasa ny Google Meet ianao:
Amin'ny antso an-tsary efa noforonina, mandehana amin'ireo teboka telo mitsangana hita eo ankavanana ambony
Ao amin'ny safidy «Change background» tsindrio eo amboniny, safidio ny hanova na hampanjavozavo ny fiavian'ilay antso an-tsary
Raha tsindrio ny takelaka Change, dia hisokatra ny menio mirotsaka, hampiseho sary maromaro hanovana anao i Google, na dia tsindrio + aza ianao dia afaka misafidy sary iray ary asao hisafidy azy
Raha manjavozavo dia azonao atao maivana ilay izy na aolaho ny fiaviany iray manontolo, miankina amin'ny zavatra tsirairay amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa
Google Mifanaraka amin'izany dia mitaky dingana mandroso, ary tena zava-baovao mahaliana ho an'ireo izay mivory isan'andro. Ny sehatra dia manome antso an-tsarimihetsika manodidina ny 60 minitra isaky ny fotoam-pivoriana, fotoana lehibe sy izany rehetra izany amin'ny kinova maimaim-poana.
Google te-hampihatra fivoarana vaovao tsy ho elaHo an'ity dia manana volana maromaro mialoha izy ary tsara foana ny manavao ny rindranasa izay nanjary nilaina tamin'ny maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hanovana ny ambadiky ny antso an-tsary ao amin'ny Google Meet
Samsung Galaxy S21 Ultra dia ho tonga miaraka amin'ny fakantsary 108 MP sy autofocus laser havaozina
Ahoana ary aiza no anaovana fampidinana stickers ho an'ny WhatsApp